स्वस्थ यौन जीवनको लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
स्वस्थ यौन जीवनको लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरु !!
धेरै महिलाहरु यौनको समयमा आवाज निकाल्छन्। वास्तवमा आवाजका कारण उनीहरु आफ्नो साथीसँग सन्तुष्ट रहेको देखाउन चाहन्छन् । तर, धेरै पुरुषहरूले यसलाई नजिकबाट बुझ्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंको पार्टनरले पनि आवाजको भाषा बुझ्दैन भने दुः खी नहुनुहोस् । उनीहरूको प्रकृति बुझ्नुहोस् र समर्थन गर्नुहोस् । अनलाइनखबर बाट सभार